संयोजक भट्टराईको प्रश्न- 'क्रान्तिबाट आएका नेताहरु कतै जनताकै विरुद्ध त गइरहेका छैनन् ?' | नयाँ शक्ति नेपाल
संयोजक भट्टराईको प्रश्न- 'क्रान्तिबाट आएका नेताहरु कतै जनताकै विरुद्ध त गइरहेका छैनन् ?'
पाँचथर । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले जनताको ऐनामा हाम्रो अनुहार कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न आएको बताउनुभएको छ ।
पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा एक महिने जनसंवाद यात्रा सुरु गर्दै उनले आफैं रुपान्तरण हुने अभियानको सुरुवात गरेको बताउनुभयो । 'नयाँ शक्तिले मध्यपहाडी लोकमार्गमा सुरु गरेको राष्ट्र जनसंवाद अभियान राष्ट्र जोड्ने अभियान हो, समृद्धिको अभियान पनि हो,' उहाँले भन्न्भयो, 'यो हामी आफैं पनि जनताबाट सिक्दै रुपान्तरण हुने अभियान हो ।'
उहाँले नागरिकलाई निर्मम भएर सल्लाह, सुझाव र आलोचना गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा राजनीतिक शुद्धिकरण बिना समृद्धि सम्भव नभएको उहाँको निष्कर्ष थियो । 'विकास र समृद्धिको लागि राजनीति असल हुनुपर्छ, यसको लागि नेपालमा राजनीतिको शुद्धीकरण हुन आवश्यक छ,' उहाँले भन्नुभयो ।
व्यवस्था फेर्ने आन्दोलनमा सहभागी भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्नेक्रममा नेपाली नेताहरुले लामो संघर्ष, जेलनेल र बलिदानीसम्म व्यहोरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । लामो संघर्षबाट आएका नेताहरु पनि सत्ताको वरिपरि लुटुपुट हुनु दुःखद भएको अनुभति उहाँले सुनाउनुभयो ।
'क्रान्तिको रापताप सेलाएपछि नेताहरुमा पनि पशुवत र दानवी गुण मुखर हुँदो रहेछ,' हिउँले सेताम्मे भएको चिवाभञ्ज्याङमा उभिएर उहाँले भन्नुभयो, 'गुलियोमा झिंगा लत्पिएजस्तो नेताहरु सत्ताको वरिपरि लुटुपुटिएको देख्दा दुःख लाग्छ ।' उहाँले देशमा ठूला-ठूला काण्डहरु घटेको भन्दै 'क्रान्तिबाट आएका नेताहरु कतै जनताकै विरुद्ध त गइरहेका छैनन् ?' भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
विकासको रकम केही नेताहरुले दुरुपयोग त गरिरहेका छैन्न् भन्ने जनतामा भएको आशंकालाई दलका नेताहरुले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
'हामीले नयाँ पार्टी मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक अभियान सुरु गरेका हौं । जुनसुकै पार्टीका भए पनि हामी सबै रुपान्तरण होऔं,' उहाँले भन्नुभयो, 'केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्न लागिपरौं ।'
उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नै विकासका वाहक भएको बताउनुभयो । 'स्थानीय जनप्रतिनिधि नै विकासका वाहक हुन्,' उहाँले भन्नुभयो, 'हामी वहाँहरुसँग नै अन्तर्क्रिया र अनुभव आदानप्रदान गर्न चाहन्छौं ।'